यी ५ बाहेक सबै मन्त्री परिवर्तन हुदै, क-कसले पाउदैनछन नयाँ चान्स ? नामसहित — Sanchar Kendra
१पदभार सम्हालेकाे २४ घण्टा नबित्दै गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले चाले यस्तो कदम, ७७ वटै जिल्लालाई गयो सर्कुलर
यी ५ बाहेक सबै मन्त्री परिवर्तन हुदै, क-कसले पाउदैनछन नयाँ चान्स ? नामसहित
काठमाडौं । सरकार गठन भएको सत्र महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेकाे छ। सरकारका मन्त्रीहरुको काम प्रभावकारी नभएको आलोचना र गुनासो बढेपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री ओली लागेका हुन् । सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र परिणाम देखाउने गरी काम गर्न मन्त्रीमण्डल फेर्नुपर्ने पार्टीभित्रबाटै दबाब बढेपछि एक दुई सातादेखि उनले पार्टीका नेताहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् ।
नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीकाे सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्धय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम लगायतका शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गरेका छन्। साथै उनले मन्त्रीमण्डल फेर्दा नयाँ मन्त्री हुने पात्रको बारेमा पनि परामर्श गरेका छन् । सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीका शीर्ष नेताको सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको विभाग र आयोगका प्रमुखहरुको जिम्मेवारीको टुंगो लागेलगत्तै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेको उनको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार चारवटा मन्त्रीबाहेक अरु मन्त्रीलाई विदाई गरेर नयाँ मन्त्रीलाई ल्याउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । गृह, रक्षा, उर्जा, परराष्ट्र र सञ्चारबाहेक अन्य मन्त्री हटाउने गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको स्रोतको दावी छ ।
‘प्रधानमन्त्री मन्त्री मात्र होइन सचिवालयका विवादित सदस्यलाई हटाएर नयाँ पात्र ल्याउने कसरतमा लाग्नुभएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘दुई तिहाईको सरकारले परिणाम दिने गरी काम गर्ने मन्त्री ल्याउन प्रधानमन्त्री कटिवद्ध हुनुहुन्छ ।’ भीम रावल, योगेश भट्टराई, महेश वस्नेत, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल नयाँ मन्त्री हुनेहरुको पहिलो सूचिमा रहेका छन् । विगतमा गुटगत रुपमा मात्र मन्त्री बनाएको आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक सबै गुटबाट प्रतिनिधित्व हुने र काम गर्नसक्ने पात्र समावेश गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएका छन ।
यसैगरी समाजवादी पार्टीको भागमा परेको शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने माग उठेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त पार्टीका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसँग यसबारे छलफल गरेको बताइएको छ । नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पार्टीभित्रको कार्यविभाजन टुंगो लागेपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने गरी गृहकार्य अगाडि बढिरहेको बताए । ‘मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयमा पार्टीभित्र छलफल अगाडि बढेको छ, प्रधानमन्त्रीले छिट्टी निर्णय लिनुहोला ।’ मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गर्ने तयारी तीब्र बनेपछि प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार र अध्यक्ष प्रचण्ड निवास भैसीपाटीमा हाल भइरहेका मन्त्रीहरुको घुइँचो बढेको छ । नयाँ मन्त्री बन्नका लागि नेताहरुले लविङ अगाडि बढाएका छन् ।
यता सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का २ अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले फेरी पनि सचिवालय अर्थात् पार्टी हेडक्वार्टर बैठक डाँकेका छन् । नेताहरुको कार्य विभाजन टुंगो लगाउन केन्द्रीय सचिवालय बैठक आज अपराह्नका लागि बोलाइएको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकमा ३२ वटा केन्द्रीय विभागसहित जनसंगठनका इञ्चार्जहरुको बारेमा छलफल गर्ने बताइएको छ । अहिले सर्वाधिक चर्चा र विवादमा रहेको स्कुल विभागसहित सबै विभागको प्रमुखका बारेमा बैठकमै छलफल गर्ने सहमति भएको एक नेताले बताए । स्कुल विभागमा ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठको दाबी परेपछि नेकपाले जिल्ला इञ्चार्ज टुंगो लगाए पनि विभाग प्रमुखहरु टुंग्याउन सकेको छैन ।
स्कुल विभागको विवाद भने इगोका रुपमा बढेको र व्यक्तिगत तहमा आरोप प्रत्यारोप भएको भन्दै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले शनिबार पनि बीचको बाटो खोज्न छलफल गरेका थिए । विवाद बढिरहे तत्काल सो विभागको प्रमुख कसैलाई नबनाइ अध्यक्षहरुले नै राख्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ । अध्यक्ष र महासचिवले कुनै विभाग नलिने समझदारी रहे पनि स्कुल विभागलाई विवादित बनाइएपछि यो विकल्पमा छलफल भएको हो । यद्यपि, आज बस्ने सचिवालय बैठकमा अन्य विकल्पमा समेत छलफल हुने एक नेताले बताए । सचिवालयकै सदस्यमध्ये झलनाथ खनालले सो विभाग आफूलाई दिए स्वीकार गर्ने बताइसकेका छन् ।
नेकपाले राजधानी विशेष प्रदेश कमिटी गठनका बारेमा पनि गृहकार्य गरेको छ । राजधानी काठमाडौंमा रहेका मजदुर,युवा विद्यार्थी, पेशागत जिल्ला कमिटीहरूलाई नेतृत्व गर्ने गरी विशेष प्रदेश कमिटी गठन हुने भएको छ । यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । यसैबीच, अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको पनि सम्भवतः सचिवालय बैठकले आजै घोषणा गर्नेछ ।
तीनवटा आयोगमध्ये दुई अध्यक्ष पूर्वएमाले र एउटा पूर्वमाओवादीले पाउने समझदारी भएको छ । यी आयोगका अध्यक्ष पार्टीको पदेन स्थायी कमिटी सदस्य हुन्छन् । अनुशासन आयोगमा अमृत बोहोरा र लेखा परीक्षण आयोगमा डा.पुष्प कँडेल प्रस्तावित छन् भने निर्वाचन आयोगको अध्यक्षमा अमिक शेरचनको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षमा केशव बडाल र जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको अध्यक्षमा नन्दकुमार प्रसाई प्रस्तावित छन् । बडाल पूर्व एमाले हुन् भने प्रसाई पूर्व माओवादी हुन् ।
पदभार सम्हालेकाे २४ घण्टा नबित्दै गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले चाले यस्तो कदम, ७७ वटै जिल्लालाई गयो सर्कुलर